7 बोटहाउस व्यंजन को प्रयास गर्नुपर्छ - Graton
फिर्ता आउनु भएकोमा स्वागत छ! आज हामी एशियाई खाना को हाम्रो प्रेमीहरु को सबै को लागी एक विशेष उपचार पाएका छौं। हामी सँगै Boathouse एशियाई भोजनालय बाट हाम्रो निरपेक्ष मनपर्ने मेनु आइटम को एक सूची राखेका छौं। सुशी देखि छोटो पसलीहरु को लागी, wok seared गोमांस र बीच मा सबै कुरा, तपाइँ यी कुनै पनि चयन संग निराश हुनुहुन्न। खोतलौं!
सही ब्याट बन्द, हामी हाम्रो मेनु को एक धेरै साहसी क्षेत्रहरु को साथ शुरू गर्नेछौं। सबै समुद्री खाना सीधै जापान बाट आयात गरीन्छ। तपाइँ मध्ये ती को लागी कि यो कहिल्यै कोसिस गरीएको छैन को लागी, साशिमी एक असाधारण उच्च ग्रेड, सागर बस्ने माछा को आकार काट्न नमूना हो। सबैभन्दा साधारण वर्गीकरण "सेके" वा सामन, "Hamachi" वा Yellowtail, र "Maguro" वा Bluefin टूना हुनेछ। Wasabi वा अदरक को एक स्पर्श जोड्नुहोस् तपाइँको स्वाद कलियों लाई ओभरड्राइभ मा किक गर्न को लागी!
जस्तै नाम सुझाव दिन्छ, यो calamari एक सानो किक संग आउँछ। रसदार, पैन seared स्केलप एक हल्का फ्राइड कोटिंग कि कुरकुरा भलाई को एक बिट संग बनाउँछ यो कटोरा मा मुख्य हो। अनुभवी घंटी काली मिर्च, प्याज, खुर्सानी, र मूंगफली केहि जटिलता र एक स्वादिष्ट सुगन्ध प्रदान गर्दछ कि निश्चित रूप बाट तपाइँ एक दोस्रो मद्दत को बारे मा सोच्नुहुनेछ।
यो एक भ्रामक नाम को एक बिट हुन सक्छ किनकि यो रोल एक निरपेक्ष कृति हो। प्रत्येक टुक्रा मसालेदार ट्यूना, tempura झींगा, र ककडी एक परम्परागत समुद्री शैवाल र चावल बाहिरी शरीर संग संगै राखिएको छ। "Unagi" वा ईल को टुक्रा नाजुक शीर्ष मा राखिएको छ र एवोकाडो को स्लाइस द्वारा तल राखिएको छ। यो सबै को शीर्ष मा अन्तिम चेरी जीवंत रंग "Tobiko" वा माछा अण्डा कि मसालेदार aioli संग ठाउँ मा आयोजित गरीन्छ को अतिरिक्त छ। दिइएको छ कि वर्णन यो एक ट्रेन भग्नावशेष जस्तै लाग्न सक्छ तर यो एक हो कि तपाइँ अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ।
हामीलाई थाहा छ हाम्रा केकडा फ्यानहरु दर्शकहरुमा छन्। यदि त्यो तपाइँ हो, तब तपाइँ एक पूरै केकडा संग जाने विचार गर्नु पर्छ। पूर्णता को लागी धमाकेदार र एक रंगीन foodie फोटो ओप को लागी उचित रूप मा सजाइएको, Boathouse को पूरा केकडा एक मीठो र खट्टा इमली चटनी संग आउँछ कि धेरै को लागी, अधिक सामान्य नींबू र मक्खन बूंदा बदली। गम्भीरतापूर्वक, तपाइँ यो चटनी सबै चीज समुद्री खाना मा यो प्रयास पछि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
मैले यो मेरो आफ्नै wok मा कोशिश गरें र महसुस गरें… मलाई अलि बढी प्रशिक्षण को आवश्यकता हुन सक्छ। Boathouse मा हाम्रा साथीहरु, तथापि, छैन। Filet mignon को क्यूब आकार कटौती फ्याँकिएको छ र अनुरोध मा घंटी मिर्च, प्याज, र ब्रोकोली संग क्रम मा एक जटिल, पूर्ण स्वादयुक्त बीफ विकल्प छ कि सुशी वा समुद्री खाना मन नपर्ने को लागी एक उत्कृष्ट मेनू विकल्प को रूप मा कार्य गर्दछ। यो आइटम धेरै राम्रो सेतो चावल वा हलचल फ्राई Lo Mein को एक पक्ष संग जोडी।
ब्ल्याक बीन सॉस मा Clams
ताजा मनिला Clams, नाजुक diced प्याज, अदुवा र jalapenos को एक स्पर्श संग बनाइएको, यो हाम्रा पाहुनाहरु को लागी आफ्नो समुद्री खाना पकाएको को लागी अर्को शानदार छनौट हो। यो पकवान को लागी एक सुझाव जोडी एक सेतो sauv blanc हुनेछ। तपाइँ पनि एक सानो सर्फ र टर्फ कार्य को लागी केहि बीफ चाउ रमाईलो आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
कोरियाली छोटो रिब्स
मसला, घंटी मिर्च र प्याज को सही मिश्रण marinate, स्वाद र यो पकवान गार्निश को लागी प्रयोग गरीन्छ। Kalbi पसलीहरु अमेरिकी शैली पसलीहरु बाट फरक तरीकाले उनीहरु काटिएका छन्, जो अन्ततः छोटो पसली को एक पतली कट संस्करण उत्पादन को कारण। मीठो, सरल, र स्वादिष्ट! चीजहरु लाई अझ मीठो बनाउन को लागी तपाइँको अर्डर मा एक अनानास mojito जोड्नुहोस्।
त्यो यो सूची को एक बन्द को लागी ल्याउँछ! हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाइँलाई हाम्रो मनपर्ने Boathouse एशियाई भोजनालय चयन को केहि संग प्रेरित गरेका छौं। अधिक जानकारी को लागी वा तपाइँको अर्को आरक्षण गर्न को लागी, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् भोजन र मनोरन्जन पृष्ठ. हामी तपाईंलाई चाँडै देख्ने आशा गर्दछौं!